Ubuhle kunye nempilo Ibhanki ye-Piggy yokupheka kwabantu
Nabani na othethile, kodwa uthetha, bhetele kunezityalo zemvelo, akunakwenzeka ukuphilisa izifo ezahlukileyo. Umzekelo ocacileyo ukuqokelela isisu. Ukudibanisa okuhlukeneyo kweedrovini zonyango kukuvumela ukuba ujongane nazo zonke iingxaki. Iimali ezifanelekileyo zikhethwe ngokubhekiselele kwisifo.
Iqoqo legastric 1
Iqoqo lokuqala lokugcoba liqulethe la macandelo alandelayo:
Wort St. John's wort;
Ngokwemiyalelo kwi-collections collection 1, kufuneka isetyenziselwe i-gastritis ene-acidity ephezulu, evamile kunye nokwandiswa kwemfihlo yesantya. Naluphi na uhlobo lwesifo kwisigaba esithile sokuphuhliswa luhambelana nokuvakalelwa kakhulu, ngoko ufuna ukuqala unyango ngokukhawuleza.
Lungisa inombolo yokuqokelela isisu esiswini esilula kakhulu: i-tablespoons ezimbalwa zomxube oomileyo uthele iititha ezingama-alitha amanzi abilayo kwaye ushiye ukunika iiyure ezintathu. Emva koko, unobungozi uze uthathe ingilazi kathathu ngosuku malunga nesiqingatha seyure ngaphambi kokutya.
Ukuqokelela isisu 2
Iinqununu eziphambili zeqoqo zokuqala zesibini nezesibini ziyafana ngokufanayo. Ukongezelela, iqoqo le-2 liquka ezi zinto zilandelayo:
amagqabi endlebrasi zasendle;
magqabi omnyama we-currant;
iikona zeehapu ;
Ngokuphambene neyokuqala, iqoqo lesibini lesondlo linconywa ukuba lusegastritis nge-acidity ephantsi kunye nokuvalwa okuphantsi kwejusi yesisu. Ukuba ingxaki yayingagxininiswa, kwaye kwimbutho i-dysbacteriosis ayizange iqhube, ukwenza amanyathelo kwaye uqale ukufumana ukuqokelela kuyimfuneko kamva emva kokuvela kweempawu zokuqala.
Le ngxowa yesisu isilungisiwe kwaye ithathwa ngendlela efanayo nendlela yokulungisa yangaphambili. Umphumo wonyango lweqoqo ungabonwa emva kweentsuku ezimbalwa zokwamkelwa rhoqo.
Ukuqokelela isisu 3
Iqoqo lesithathu lokuqokelela isisu lenzelwe ukuphucula isondlo kunye nokulungelelanisa ukugaya. Uzinzile njengeprospymolytic epholile kwaye engekho ngaphantsi kwe-laxative. Njengamanye amaninzi amachiza, isisu sesithathu singasetyenziselwa i-gastritis. Kodwa iyakwazi ukusebenza ngokuphumelelayo kuphela kwizigaba zokuqala zesifo. Ukuqalisa i-gastritis kungcono ukunyanga kunye neyeza elenziwe ngokukodwa kule njongo.
Iqoqo lesithathu liqukethe:
magqabi e peppermint;
Pheka umhluzi kwindawo yokuhlambela amanzi. I-tablespoon yokuqokelela ithulule ingilazi yamanzi abandayo ahlambulukileyo kwaye uyibambe phezu kwe-steam ihafu yesure. Iqoqo elityhilekileyo licocekileyo. Phuza umhluzi kabini ngelilanga kwisiqingatha seglasi. Ngaphambi kokusela isiselo kucetyiswa ukuba ugubungele.
Iqoqo le-Gastric 4
Ukuze umzimba uphelelwe ukutya okungcono, kuyacetyiswa ukuba uphuze ukutyunjwa kwenombolo yesigxina. Esi sixhobo esithambileyo kwaye sisebenza kakuhle, esakhiwa ngamacandelo anjalo:
ziqhamo ze khumini;
Ukulungiselela isilungiso, udinga isipuni esisodwa somxube omile. Phalaza ngeglasi yamanzi abilayo uze ushiye ukunika imizuzu engama-20. Emva koko, qinisa ukuqokelela kwaye uvumele ukupholisa.
Phuza umhluzi kathathu ngosuku ngaphambi kokutya. Ngokumkela rhoqo, umphumo awuyi kuthatha ixesha elide.
Musa ukulibala ukuba izibilini zesisu zomzimba, nangona zingu-100% yemvelo, azifaneleki wonke umntu. Ngokunyamezelana komntu kunye nokunyamezela kwonyango, le ndlela iza kufuneka ilahlwe.
Imbewu ye-Chia - izakhiwo ezixhamlayo kunye nokuchasene
I-duck fat is good and bad
I-Tincture yeSbewuandra imbewu
Ioli e diliya
I-jetver ye-Beaver yokupheka
Ioli yegciwane legciwane - iipropati kunye nesicelo
Rowan - izakhiwo ezixhamlayo kunye nokuchasene
Yenza imilenze - unyango
I-osteoporosis - unyango kunye namanyathelo omntu
I-Spirulina - izakhiwo ezixhamlayo kunye nokuchasene
Kutheni i-ginger ilungile kubafazi?
Imbewu yePlantain - iimpawu zonyango kunye nokuchasene
Indlela yokubhabhisa ama-mushroom?
Imenyu yokulahlekelwa ubunzima bemihla ngemihla
Ixesha lokuphela kwehlabathi-lixesha elililo kunye nomhla owaziwayo?
Indlela yokujonga ubungakanani bezihlangu?
Ukuzilolonga ngeenyawo ezintle
Kwenzeka ngokukhawuleza ukupheka ubhontshisi ngaphandle kokugcoba?
Yintoni yokupheka ngeenkumbi zengulube?
Isifo sokunyamekela esingapheliyo - unyango
Genius okanye Fool: 30 iingcamango ezinomdla kuzo zonke iintlobo
Iifoto zembali ezenzekayo ezi-92
Nessebar, eBulgaria - ezikhangayo
Kutheni ndiphupha ukuhamba ngeengubo?
Uma Thurman noArpad Busson: imfazwe ilungelo lokugcinwa kwentombi
Iifoto ezingama-20 zeenkwenkwezi zisondele, emva kokubona ukuba uloyiko nje!
Kuphi ukusingatha inkampani entsha yeNyaka?